Kooxda Qaranka Spain ayaa ku bahdishay Jarmalka 6-0 ciyaar ka dhacday garoonka Seville ee Spain… – Hagaag.com
Kooxda Qaranka Spain ayaa ku bahdishay Jarmalka 6-0 ciyaar ka dhacday garoonka Seville ee Spain…
Posted on 18 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xulka qaranka Jarmalka ayaa lagu xasuuqday 6-0 ciyaar tartanka Yurub ee qaramada oo lagu qabtay magaalada Seville ee Spain. Kooxda uu tababaro Joachim Löw ayaa hoos u dhac ku yimid tan iyo markii ay guuldarro kala kulmeen qaranka France semi-finalka European Championship sanadkii 2016, isbadalkan hoos u dhaca ah ayaa la oran karaa wuxuu bilowday ka hor intaas, ka dib Koobkii Adduunka ee 2014.
Tababare Löw ayaa loo maleynayay inuu dib u cusbooneysiin doono xulka isagoo ku soo biirin doono da’ yar cusub oo tayo leh.
Löw wuxuu balan qaaday isku shaandheyn. Mesut Özil ayaa ka fadhiistay xulka qaranka intii lagu jiray burburka, Löw wuxuu gaabiyey shaqooyinka caalamiga ah ee halyeeyada sida Thomas Müller, Mats Hummels iyo Jérôme Boateng.
Beddelkoodana ma noqonin sidii laga filaayay, ciyaartoydii hore sida Bastian Schweinsteiger iyo Lothar Matthäus ayaa ku baaqay soo laabashada seddexda laacib ee Bayern Munich.
Guuldaradii 6-0 ee Spain ka soo gaartay Nations League Talaadadii ayaa aheyd tii ugu weyneyd ee koox Jarmal ah tan iyo markii ay 6-0 ku xaaqeen Austria ciyaar saaxiibtinimo aheyd oo ka dhacday Berlin 1931. Kaliya England ayaa waligeed ku badisay wax ka badan, 9-0 guushii saaxiibtinimo ee Oxford bishii November 1909.
“Hadda waan ognahay halka aan joogno,” Weeraryahanka Jarmalka Serge Gnabry ayaa yiri ka dib ciyaartii Talaadada ee Seville.